Tani waa su'aal ah in dadka intooda badan jeclaan lahayd si aad u hesho jawaabaha. Haddii aad leedahay casriga ah, waad ogtahay sida xiiso leh waa u bedesheen ka mid ringtone in dhagaysiga kale in ay Gurtida aad ugu jeceshahay. Xaggee ayaad ka heli this ringtones ka? Casriga la yimaadaan qaar ka mid ah ringtones random, laakiin waxaad ka heli doontaa liiska aan la haynin ringtones aad ugu jeceshahay. Marka aad garowsato in aad casriga ah ma laha ringtones aad jeceshahay, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad iska tuur. Weli Waxaad samayn kartaa ringtones ka YouTube oo iyaga lagu wareejiyo si aad telefoon. Laakiin mar kale inaad ku gaadhaan danihiina doonaa habka tani ma aha mid fudud sida in aad gaar ahaan u maleeyay markuu iyagii u gudbaayo iPhone ah. Waxaan kuu sheegi doonaa sida taas loo sameeyo in this article.
Habka 1: Download MP3 YouTube oo waxaad ka samaysaa ringtones la Lugood
Habka 2: music Record YouTube oo waxaad ka samaysaa ringtones
Habka 3: Iyada oo goobta gaare online ringtone
Wondershare AllMyTube dalab kaa caawin kara inaad kala soo bixi YouTube mp3 file si toos ah, markaa samee ringtones. Habka ugu yaraan is-lunsi, laakiin waxaan ku soo ururiyay qaar ka mid talaabo talaabo tilmaamaha la Screenshot inuu kaa caawiyo inaad aad u bilowdo. Habkani wuxuu u baahan yahay laba qaybood, qayb First wuxuu u baahan yahay qofka in uu soo bixi YouTube mp3 iyo qaybta labaad u baahan tahay qof inuu sameeyo ringtones isticmaalaya Lugood.
Tallaabada 1 Ku rakib AllMyTube
Download Wondershare AllMyTube ka hoos ku qoran. Download this YouTube video downloader taagay goobta. Ka dib dajinta dhigay ilaa ay aqbalaan shuruudaha oo ku xidh galay your computer. Ka dib markii la rakibey waa la bilaabay dhamaystiran barnaamijka AllMyTube
Tallaabada 2 Download YouTube MP3 files
Waxaa jira laba siyaabood oo kala soo bixi videos isticmaalaya barnaamijkan. Waxaad nuqul ka kartaa URL video YouTube ka dibna riix badhanka 'URL dhaji' dooro YouTube MP3 ka fursadaha. Habka labaad waa in guji badhanka '' download 'u dhow deegaanka video ka dooro oo keliya Audio.
Tallaabada 3 song ee Lugood yaree.
Burcad barnaamijka Lugood on your computer. Ku dar song YouTube in aad soo bixi galay Maktabadda music Lugood. Dooro gabaygii maktabadda iyo xaq guji ku yaal. Dariishadaha dhinacyada A la soo bandhigi doonaa. Hoos fursadaha iyo dooro "Get Info" doorasho.
Window kale doonaa po iyo riix 'Xulashada' tuubada. Tag in sanduuqa "Jooji Time" oo qor waqtiga aad door bidayso sida caadiga ah ka yar 30 seconds
Tallaabada 4 Samee Version AAC ah.
On song YouTube in aad dooratay, xaq guji waxaa mar kale. Tag ee "Samee AAC Version." Xulashada iyo dooro ikhtiyaarka this. Version ayaa gabayga oo hadda lagu soo bandhigi doonaa. Tag dib version asalka ah ee song YouTube ee la doortay iyo riix qaybta isku magacaabay "Get Info". Ka hor taga oo u tirtirto wakhtigii aad ku soo gashay in markii joogsiga.
Talaabada 5 Change file kordhiyo si m4r.
Haddii aad isticmaalayso Mac, u tag version gaaban ee heesta xaq guji ku yaal. Markaas doorto ikhtiyaarka magacaabay "Show in Finder." Tag kordhin faylka, guji iyo overtype ku yaal. Hubi m4a reading in uu is beddelay si m4r. Hel dib qaybta guriga Lugood by double gujinaya heesta. Tag simbiriirixan tiro todobo.
Waayo, kuwa la isticmaalayo nidaamka ka hawlgala Windows, habka tahay wax kakan. Tag daaqadaha inta ka dhex bilaabaan doorasho, ka dibna si guddi ay gacanta. Dooro si aad u eegto calanka guddi gacanta doorataa "walxood oo waaweyn" kaalinta ugu dhankiisii ​​midig. Tag ah "Folder Options" oo guji ku yaal. Riix "View" tab hoose ee suuqa kala soo bandhigay oo guji si uncheck ah '' kordhin Qari noocyada file loo yaqaan "doorasho kadibna riix" OK. "
Si ay u tagaan oo ay u version gaaban ee heesta iyo xaq guji ku yaal. Midig u guji song iyo dooro "Show in Windows Explorer".
Heesta furi doonaa sahamisa daaqadaha. Tag horyaalka ah song YouTube xulay iyo hal click ku yaal. Beddel kordhin file gabayga oo ah in qaab .m4r. Haddii aad labo gool guji song aad dooratay, waxaa furmi doona Lugood.
Dib u tag qaybta guriga Lugood, guji hoos u soo dhaadhacay raggii reer maktabadda music Lugood. Dooro fursad u ku tilmaamay "codadka." Laga soo bilaabo liiska song soo bandhigay, aad arkaysaan doonta ringtone.
Habka labaad waa si ay u qoraan music YouTube oo waxaad ka samaysaa ringtones la Lugood. Barnaamijka waxaa in aad u baahan tahay waa Wondershare Streaming Audio Recorder .
Tallaabada 1 Download Streaming Audio Recorder
Download barnaamijkan ka hoos ku qoran. Marka aad soo bixi xiligii Wondershare Streaming AudioRecorder, fadlan laba jibaar waxa guji si dhakhso leh loo soo dajiyo.
Tallaabada 2 Record YouTube Music
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka, guji "Record" button. Dhinaca midig sare ee barnaamijka, waxaad arki doontaa ah garaaf spectrum audio. Waa in aad la xiran internetka ah oo deggan si ay taasi YouTube music taariikhqorihii inuu ku soo bilowdo diiwaan aad music. Waa inaad sidoo kale ay helaan audio / video geeyo fur-iyo qalabka. Web Your browser waa in sidoo kale la furay. Hit button rikoor marka music aad jeceshahay bilaabo inuu sii qulquli iyo barnaamijkan toos ah u bilaabi doonaa si ay u qoraan on aad tube aad song ciyaaro.
Wali waad isticmaali kartaa qasabadaha kale ku siiyaa biraawsarkaaga ama samayn wax mashaariic kale on your computer. Marka aad tahay iyada oo la qoro aad YouTube geeyo song, guji badhanka joojin laga helay widget hago. Widget Tan waxaa laga helay dhanka midig ee shaashada barnaamijka. Farriin ka muuqan doona oo muujinaya in lagu qoro marka la dhamaystiro si guul leh.
Tallaabada 3 Samee ringtones on Wondershare SAR
In la abuuro ringtone ah madaxdii gabayga oo la duubay, u tag icon dawan oo ku yaalla meel u dhow magaca artist ah oo guji ku yaal. Isla markii riixaya icon jalaska, bitmap ka mid ah wadada lagu soo bandhigi doonaa. Halkan waxaad si fudud u dooran kartaa heesta iyo jar qaybaha ah in aadan rabin. By sameeyo, waxaad ku abuuray ringtone ah istareexsan.
Habka saddexaad ee la abuurayo ringtones ka YouTube isticmaalayo ah goobta gaare ringtone online. Ugu wanaagsan online ah in aan caadiyan la isticmaalo waa Brinked.com. Boggan waxa uu bixiyaa ah web codsiga saaxiibtinimo ku ool ah in loogu badalo kartaa file maqal ah wax galay ringtone ah. Waxaad u bedeli karaan wax MP3 songs in aad ka soo dejisan YouTube galay ringtone ah ee aad iPhone. Waxaan is-idhi this site waa wax ku ool ah tan iyo markii ay qabsan karaan audio geeyo ka browser kasta oo u celi galay ringtone ah. Goobta waa goob lacag la'aan ah oo aad ka heli doontaa habka aad u fududahay inuu fahmo oo raaco.
Talaabada 1: In si ay u isticmaalaan codsiga web at Brinked.com, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan iyaga la saxiixay ilaa goobta. Ka dib markii la abuurayo xisaabtaada at this site ka dibna raac tilmaamaha hoos ku qoran si ay u abuuraan ringtones aad ka YouTube.
Talaabada 2: Tag YouTube video geeyo in aad rabto in aad noqon galay ringtone ah. Copy URL ee this video YouTube loo siiyaa biraawsarkaaga iyo paste ee badhanka ku tilmaamay "Samee ka YouTube URL."
Talaabada 3: Immeduiately ka dib markii dhajinta URL, codsiga internetka iyo this site bilaabi doonaan in ay ku shuban faylka sida ku cad belew web image.
Tallaabada 4: Ka dib markii loading dhamaato, waxaad ku arki doontaa garaaf spectrum audio. Dooro qayb ka mid ah song YouTube in aad rabto in aad idiinku beddelin ringtone ah. Waxaad dooran kartaa in ay galaan tiro ama la isticmaalo jiirka inay jiidi oo ay doortaan qayb ka mid ah in aad u baahan tahay.
Talaabada 5: Ka dib markii xulashada qayb ka mid ah in aad rabto in aad si loogu badalo in ay ringtone ah, hubi in aad u magacaabo.
Talaabada 6: Ka dib markii magaca aad click file soo socda si aad u dhamayso ah. Your ringtone la abuuri doonaa. Waqtiga in habkan qaadataa kala duwan oo ku xidhan nooca internet-ka aad isticmaalaysid. Haddii aad isticmaalayso internet superspeed, habka qaadan doontaa dhawr ilbidhiqsi si ay u buuxiyaan. Waxaa lagu talinayaa in aadan guji opton oranaya "dir Phone." Haddii aad guji badhanka, waxaad la qaadi doonaa si goobaha qaar ka mid ah iibiya ringtones.
Tallaabo 7: dib markii la abuurayo aad ringtone isticmaalaya app internetka ee kor ku xusan, waxa ay haatan u yahay waqti ay ku soo bixi ringtone in ay qaabkan u audio in aad jeceshahay. Haddii aad rabto in aad isticmaasho ringtone ku iPhone, file ah qaab M4R laakiin haddii aad rabto in aad u isticmaasho telefoonka ah Android, diinta faylka galay MP3. Haddii aad rabto in aad file u gudbin lahaayeen telefoonka, waxaad u baahan tahay in la raaco tilmaamaha gaarka ah. Waxaan leeyahay telefoonka ah Android. Sidaa darteed habka wareejinta ee faylka diinta u isticmaalaan si aan telefoonka waa mid aad u fudud oo dhakhso badan. Haddii aad isticmaalayso iPhone ah, waxa aad u baahan tahay inaad samayso si aad u hesho ringtone soo galeen telefoonka waa in la jiidayo file M4R in aad soo bixi gal qaybta Library of Lugood ah. Tallaabada xigta waa in ay ka Lugood si aad iPhone wareejiyo ringtone ah.
Top 20 Shabakadaha Internetka iyo Apps in Download Qosol Ringtones
Top 10 Shabakadaha kaalinta Funny YouTube Comments
Dhammaan Talooyin in aad u baahan tahay Daawashada YouTube Videos
Dhammaan Talooyin in aad u baahan tahay playlist YouTube
> Resource > YouTube > Sida loo Ringtones ka YouTube Samee